Informatika sy informatika: Ny filan'ny JedIT! | Avy amin'ny Linux
Amin'ny ankamaroan'ireo izay miditra amin'ny alàlan'ny fandalinana na fanentanana samirery, ary iza ary manao fiainana isan'andro, eo amin'ny tontolon'ny Informatika sy ny informatika (IC), dia misy «JedIT»Raha lazaina amin'ny teny hafa, karazana mpiady ara-panahy mafana fo, manan-talenta toetra manokana amin'ny fikirakirana ny maoderina, ny sarotra sy ny mandroso amin'ny resaka haitao ary indraindray aza ny siansa. Ny toetra tsara izay mazàna mifamatotra amin'ny teny mitovy aminy hafa toy ny «Geek», «Nerd», «Hacker» na tsotra fotsiny «Genio informático».
«JedIT» azo lazaina fa teny iray azo sokajiana ho fanafohezana sy / na neolozista vokatry ny teny amin'ny teny anglisy «Jedi» e «IT». «Jedi», avy amin'ny tantara foronina amin'ny andian-tsarimihetsika an'ny «Star Wars» mora tohina amin'ny hery, ny lafiny maivana ary «IT» avy amin'ny fanafohezana ny andian-teny amin'ny teny anglisy, «Information Technology», izay ny dikany amin'ny teny espaniola dia nadika hoe «Tecnología de Información».
1.9 Teknolojian'ny fampahalalana
2 Fahalalana momba ny solosaina sy informatika
2.1 Fanohanana informatika
2.2 Tambajotra sy fifandraisan-davitra
2.3 Servers sy ivotoerana data
2.4 Fandaharana sy fampandrosoana
2.5 Fiarovana amin'ny solosaina, fandrobana pentina ary fanapahana hacking etika
2.6 IT sy IT Management
2.7 Kolontsaina siantifika-teknika ankapobeny
2.8 Kolontsaina ankapobeny Humanistic
Alohan'ny hidiranao ny lohahevitra dia tsara ny manohy manazava kely ireo teny na foto-kevitra voalaza. Noho izany dia afaka milaza isika fa ireto manaraka ireto dia:
Izany dia «entusiasta o apasionado» momba ny lohahevitra na sehatra iray manokana. Nifantoka tamin'ny fanangonana, fanangonana angona ary fahatsiarovana mifandraika amin'ilay lohahevitra tena tiany. Ary mijanona ho variana amin'ny farany, mafana indrindra, lamaody indrindra indrindra, izay atolotray sy ankafizin'ny foto-kevitrao.
Manondro a «intelectual estudioso» momba ny lohahevitra na sehatra iray manokana. Mifantoka indrindra hahatratrarana zava-bita amin'ny alàlan'ny fiezahana hahazo fahalalana sy fahaiza-manao momba ny te hahafanta-javatra sy zavatra mahaliana, izay atolotray sy ankafizinao ny foto-kevitrao.
Manisy firesahana amin'ny ankapobeny ireo «individuos especiales» izy ireo dia tia manao zavatra mahazatra amin'ny fomba hafa, tsara kokoa na tsy mampino, hanana eritreritra hafa ary imbetsaka "ivelan'ny boaty". Ireo dia mazàna manana ny kalitaon'ny finiavana, mampianatra ny hafa ary mifaninana. Rehetra mba hahatratrarana fiovana izay mampitombo fahasambarana, fandrosoana, fahalalahana, fahaleovan-tena, fiainana manokana sy filaminana, manokana sy iraisan'ny rehetra. Noho izany, ny hacker dia olona mieritreritra sy manao zavatra tsara kokoa ho an'ny maro an'isa.
Na dia amin'ny ankapobeny aza, ilay teny «Hacker» dia matetika ampiasaina hilazana fotsiny «expertos IT, profesionales o autodidactas» izay mankafy ny rafi-teknolojia mitsofoka mba hampisehoana ny fahaizany manao computing eo imason'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo, ary mazàna miady amin'ny "rafi-pitsarana mpampijaly eran'izao tontolo izao" izay soloin'ny orinasa sy ny governemanta matetika. Ary tsy mitovy amin'ny «Crackers» izany koa Izy ireo dia manam-pahaizana momba ny informatika, matihanina na mahay mampianatra, izay miditra an-tsokosoko sy manimba ny rafitry ny solosaina noho ny fikasan-dalàna.
«JedIT» matetika dia teny ampiasaina hilazana ireo olona eo amin'ny sehatry ny Informatika sy ny Computing izay mazàna «una mezcla de los 3 anteriores conceptos mencionados». Midika izany fa kendrena ireo teknolojia izay maniry fatratra ny hampiaraka hatrany, hahalala sy hahafehy ny vaovao indrindra, ny mangatsiaka indrindra, ny lamaody indrindra amin'ny IC amin'ny ankapobeny.
Fampiasana fandinihana mafy sy fampiharana tsy tapaka, amin'ny alàlan'ny fomba matihanina na ampianarin-tena, hahazoana ny fahalalana sy ny fahaizana ilaina amin'ny sehatry ny haitao. Ary mirona hiavaka amin'ny ambiny izy ireo, amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miasa tsara aminy, noho ny toe-tsainy «Hacker»Izany hoe manao sy mieritreritra zavatra samihafa, te hizara, mianatra mampianatra ary mifaninana be.
La«Computación» dia manondro ny fandalinana siantifika natao tamin'ny rafitra fitantanana fampahalalana mandeha ho azy, izay tanterahina amin'ny alàlan'ny fitaovana natao ho an'ity tanjona ity. Ny computing dia manondro ny haitao izay mamela ny fikirakirana sy ny fivezivezena amin'ny fampahalalana momba an'io siansa na fahalalana io ary koa ireo fototry ny teôlôjia momba ny fampandehanan'ny solosaina, ary ny fampiharana samihafa amin'ny endrika rafitry ny solosaina.
The term «Computación» Izy io dia niandoha tamin'ny teny latina computatio. Ity teny ity dia ahafahantsika miantso ny fiheverana ny fanisana ho isa na fanisana, fa amin'ny ankapobeny dia ampiasaina amin'ny hoe «sinónimo de informática». Amin'izany fomba izany, dia azo lazaina fa ny computation dia mampiaraka fahalalana sy fomba siantifika.
La «Informática» dia fifehezana siantifika izay mifantoka amin'ny fandalinana ny fanodinana vaovao mandeha ho azy sy mandanjalanja amin'ny alàlan'ny fampiasana sy fampiharana ny fitaovana elektronika sy ny rafitry ny solosaina. Teny na fanafohezana solosaina avy amin'ny teny frantsay izy io «automatique d’informations», noforonin'ny injeniera Philippe Dreyfus ho an'ny orinasany «Société d’Informatique Appliquée» mg 1962.
Ao amin'ny Diksionera an'ny Royal Spanish Academy, ny computing dia faritana ho:
"Andiana fahalalana ara-tsiansa sy ara-teknika izay ahafahan'ny fikirakirana mandeha ho azy ny fampahalalana azo atao amin'ny alàlan'ny solosaina."
La «Ciencia» Io no setrin'ny fahalalana voarindra amin'ny fomba voarindra izay azo avy amin'ny fandinihana, fanandramana ary fanjohian-kevitra ao anatin'ny faritra manokana. Amin'ny alàlan'ity fanangonam-pahalalana ity no amoronana hipoka, fanontaniana, tetika, lalàna ary fitsipika. Ary noho izany, dia fehezin'ny fomba sasany izay misy andian-dalàna sy dingana maromaro.
Misaotra tamin'ny fampiasana henjana sy hentitra an'ireo «métodos» Ny fanjohian-kevitra izay mivoaka avy amin'ny fizotran'ny fanadihadiana dia voamarina, manome «rigor científico» amin'ny fehin-kevitra azo. Izany no mahatonga ny fehin-kevitra azo avy amin'ny fandinihana siantifika sy ny fanandramana azo hamarinina ary tanjona.
La «Tecnología» Izy io dia vokatry ny siansa iarahan'ny olona mandalina, mamakafaka, manamboatra ary mihevitra ny safidy tsara indrindra afaka manana fiainana feno, azo antoka, milamina ary ankehitriny, izay mihetsika, amin'ny fanavaozana, amin'ny fivoarana tanteraka ary manova ny indostria samihafa manerantany, manomboka amin'ny fanatsarana isan'andro ny fiainana ka hatramin'ny sarotra indrindra.
La «Tecnología» io no setrin'ny fahalalana sy fitaovana anaovan'ny olona tontolo tsara kokoa, mahasalama, mahafinaritra kokoa ary ahazoana aina amin'ny fanatsarana ny fiainana. Ny teknolojia dia manambatra ny teknikan'ny fanatsarana toerana iray amin'ireo revolisiona samihafa niseho tato anatin'ny taonjato maro, ny fambolena, indostria, dizitaly ary ireo ho avy hafa. Ity teny ity dia mitambatra amin'ny teny grika roa izay «Tekne» izay midika teknika, kanto ary «logia» izay manome dikanteny fahaizana, izany hoe ny teknika na fahaizan'ny zavatra na momba zavatra iray.
ny «Tecnologías de la Información (TI)» Matetika izy ireo dia nofaritana ho toy ny andiana fizotry sy vokatra mifandraika amin'ny fitehirizana, fanodinana, fiarovana, fanaraha-maso, famerenana ary fampitana nomerika amin'ny fampahalalana, na amin'ny elektronika na amin'ny optika. Ary hatramin'ny nivoahan'ny Internet, ny lafiny serasera dia nampidirina betsaka tao anaty IT, ka nandrakotra ireo faritra midadasika kokoa, amin'ny anarana fantatra amin'ny hoe «Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)».
Amin'ny fomba toy izany «Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)» dia ny vokatry ny fifandraisana ny «Informática» ary ny «Telecomunicaciones». Ny zava-drehetra, mba hanatsarana ny fanodinana, ny fitehirizana ary ny fampitana ny fampahalalana amin'ny alàlan'ny medium sy endrika rehetra (lahatsoratra, feo, horonan-tsary ary sary, ankoatry ny hafa).
Takatr'i «Telecomunicaciones» ny napetraka amin'ireo teknika izay mamela ny fifandraisana lavitra, metatra na kilometatra an-tapitrisany ary «Telecomunicación» amin'ny fifehezana mifantoka amin'ny famolavolana, ny fianarana, ny fampandrosoana ary ny fitrandrahana ireo rafitra ahafahana manao fifandraisana.
Fahalalana momba ny solosaina sy informatika
Eo amin'ny sehatry ny «la Informática y la Computación» betsaka ny miaina fa a «JedIT» misongadina satria mazàna manomboka amin'ny rangotra ao amin'ilay faritra io, ary mandroso izy ary mitombo tsikelikely, manarona sy mamantatra fahalalana lehibe an'ny tsirairay amin'ny faritra misy azy. Vokatr'izany, tsara «JedIT» mazàna mahalala sy mahafehy ambaratonga iray ny fahalalana mifandraika amin'ireto dingana manaraka ireto «la Informática y la Computación»:
Fahalalana ankapobeny momba ny hevitra sy ny voambolana mifandraika amin'ny sehatry ny:
Siansa sy teknolojia.
Computing sy fampahalalana.
Fifandraisana sy fampahalalana.
Tambajotra informatika (PAN, LAN, MAN, WAN).
Internet sy Intranet.
Domain ny teôria sy ny fampiharana ny maritrano fototry ny Computer / Computer (Hardware):
Inona no atao hoe Solosaina?.
Inona no atao hoe mpizara?.
Singa iray amin'ny solosaina: Kabinetra (Case), famatsian-herinaratra (famatsian-jiro), Motherboard (MotherBoard), Processeur (CPU), Memory (Memory), Screen (Display / Monitor), Keyboard (Keyboard), Mouse (Mouse), Printer .
Ny fivondronana, ny fametrahana, ny fametrahana ary ny fikojakojana ny fisorohana sy fanitsiana ny Solosaina (Desktop, Finday sy ny solosaina finday) sy ireo rafitra miasa hafa, ara-barotra na tsia, be mpampiasa indrindra.
Fifehezana ny hevitra momba ny Rafitra, Fandaharana ary Fampiharana (Rindrambaiko), ny sakany, ny fetrany ary ny tsy fitovizany:
Rafitra miasa tsy miankina sy mihidy, ary rafi-pandidiana maimaimpoana sy misokatra, ary ny rindran-tany misy azy na multiplatform, mifanaraka sy ilaina.
Dexterity ambony na avo lenta etsy ambony
Office Suites tsy miankina sy maimaim-poana
Fitaovana rindrambaiko loharano tsy miankina sy mihidy, ary rindrambaiko loharano malalaka sy misokatra.
Mandidy ny Windows sy Linux Terminal
Scripting ho an'ny Windows sy Linux
Fifehezana ny teôria sy ny fampiharana ny maritrano sy ny singa amin'ny tambajotra na sehatry ny computing:
Karazana tariby sy ny sokajy misy azy
Architecture amin'ny tamba-jotra: Point-to-point, client-server, client-server hierarchical, nozaraina.
Karazana tamba-jotra: Bus, Star, mifangaro, peratra, hazo, Double Ring Mesh, mifandray.
Segmentation amin'ny tamba-jotra
Adiresy amin'ny tambajotra
Modely TCP sy OSI
CISCO CCNA Modely sy teknolojia
Servers sy ivotoerana data
Domain ny teôria sy ny fampiharana ny maritrano sy ny singa ao amin'ny Data Center (Data Center):
Hardware hardware (faritra anatiny)
Karazana, marika ary maodelin'ny Servers (Teknolojia mifandraika)
Fitaovana Hardware Center
Rafitra sy fanitsiana ireo ivon-toerana
Sokajy Ivotoerana Data
Famaritana (TIER) ho an'ny Ivotoerana data
Fitsipiky ny Ivotoerana Data
Fametrahana, fikirakira ary tolo-kevitra amin'ny fampiasana Servers
Fikojakojana sy fanavaozana ny Servers
RAID nataon'i SW & HW ho an'ny Servers
Fampisarahana, tabilao fisarahana ary latabatra fisarahana kapila
Rafitra miasa amin'ny mpizara
Fampiasam-bola, fivelomana, fitomboana ary fanoloana ny servers
NAS sy ny fitantanana SAN
ASA sy fitantanana Firewall
Fametrahana sy fitantanan'ireo DMZ sy VPN
Fametrahana sy fitantanana ireo sehatra sy teknolojia fanaovana virtualization: Xen, Promox, VMware, VirtualBox, KVM, Server Citrix Xen.
Fitantanana ny fampiharana, ny rafitra ary ny serivisy: DHCP, DNS, PROXY, MAIL, IDS / IPS, SMS be dia be, Web (Apache / Nginx), Database (Postgresql / Mysql / MariaDB), fampandrosoana (PHP), Backups (Rsync, Bacula) , Vatan-kazo (Logrotate), Repository, folder zaraina (SAMBA), NTP, sns.
Fametrahana sy fitantanana ny vahaolana rehetra ao anaty 1: IredMail / Zimbra, Zabbix / Pandora / Nagios / Cacti, OwnCloud / NextCloud, Pfsense / Ipfire, GLPI / OSC Inventory, OpenMediaVault / FreeNAS, ankoatry ny hafa.
Fandaharana sy fampandrosoana
Fifehezana ny teôria sy ny fampiharana ny fizotran'ny Application Application sy ny lozisialy momba ny lozisialy:
Mpizara tranonkala: Apache, Nginx
Databases: PostgreSQL, MySQL ary Maríadb, ankoatry ny hafa.
Rindrambaiko mifandraika amin'ny fampivoarana lozisialy (Tonian-dahatsoratra sy tontolo iainana mivelatra).
Karazana fampiharana: Native, Web, Hybrid, Web Progressive ary zaraina.
Serivisy amin'ny Internet: XML, SOAP, WSDL, UDDI.
Ny zava-drehetra amin'ny serivisy (XaaS): SaaS, PaaS, IaaS.
Fiarovana amin'ny solosaina, fandrobana pentina ary fanapahana hacking etika
Fifehezana ny teôria sy ny fampiharana ireo faritra ireo:
Fandrahonana, risika, trangan-javatra.
Ny fepetra fiarovana sy ny fomba fikarohana
Lafiny ara-dalàna amin'ny fiarovana ny solosaina
Forensika amin'ny solosaina
Teknolojia fidirana an-tsokosoko amin'ny rafitra, mekanisma ary fampiharana
Injeniera sy faharanitan-tsaina ara-tsosialy
IT sy IT Management
Fifehezana ny teôria sy ny fampiharana ny fizotran'ny fitantanana mifandraika amin'ny sehatry ny teknolojia sy ny solosaina:
Fanaraha-maso, famakafakana ary fahitana mialoha ny teknolojia.
Fandrafetana ny fampandrosoana teknolojia.
Famolavolana paikady fampandrosoana teknolojia.
Famantarana, fanombanana ary fisafidianana teknolojia.
Fifanarahana sy fanavaozana ara-teknolojia.
Fifampiraharahana, fahazoana ary fifanarahana teknolojia.
Fivarotana varotra teknolojia an'ny orinasa.
Famatsiam-bola amin'ny fampandrosoana teknolojia.
Fisafidianana sy fanofanana ireo mpanolotsaina sy mpandraharaha teknolojia.
Fitantanana ny tetikasa fikarohana sy fampandrosoana.
Famatsiana sy fanombanana ny fampahalalana ara-teknika.
Farany fa tsy farany, tsara "JedIT" Hanana foana na hiezaka ny hamboly ny fahalalany mifandraika amin'ny:
Kolontsaina siantifika-teknika ankapobeny
Kolontsaina ankapobeny Humanistic
Fiarovana ny tontolo iainana sy tontolo iainana
Azo antoka fa ny sasany amin'ireo izay mamaky ity lahatsoratra ity dia hahita ny tenany taratra anio na maniry ny hahita ny tenany amin'ny fomba toy izany, a «JedIT» Ato ho ato, noho ny toe-tsain'izy ireo sy ny toetrany ankehitriny izay mampifangaro ny fahalalana sy ny fitondran-tena amin'ny an'ny a «JedIT».
Izay tsara, nanomboka izao tontolo izao dia anjakan'ny teknolojia noforonin'ny mpahay siansa sy teknolojia sangany amin'ny fanompoana varotra sy politika, ary amin'ny ankapobeny, isika izay amin'ny fomba iray na hafa dia mihevitra ny tenantsika un «Geek», «Nerd», «Hacker» o «JedIT» mazàna isika mitondra fahalalana teorika-azo ampiharina amin'ny be sy ny maro na amin'ny fomba hafa, amin'ny «la Informática y la Computación» na sehatra hafa amin'ny fiainana, amin'ny fomba hafa, imbetsaka na dia amin'ny fomba tsotra aza «blogueando».
Na izany na tsy izany, mila bebe kokoa izao tontolo izao «Geeks», «Nerds», «Hackers» y «JedITs»Noho izany, miandry anao amin'ity lafiny mahery ity izahay. Indrindra ny hery mifandraika amin'ny Free Software sy Open Source, noho izany dia mamporisika anao izahay hanohy hamaky ny anay «Blog DesdeLinux» ary jereo ny lisitry ny my Lahatsoratra noforonina tao anatin'ny 2 taona farany momba ny Informatics sy Computing.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Informatika sy informatika: Ny filan'ny JedIT!
Agent Smith malware vaovao voamarika ho an'ny Android ary izany dia efa nahatratra olona an-tapitrisany maro
Ireo mpamorona Haiku OS dia miasa amin'ny seranana ho an'ny RISC-V sy ARM